FAALADA PUNTLANDNEWS-Xalqada 1aad,”Caqabadaha Xulista Barlamaanka Puntland & Gujada Musharixiinta”.
Puntlandnews.net (Garoowe)-Guud ahaan deegaamada Puntland waxaa laga dareemayaa diyaar garaw xoogan oo loogu jiro loolanka doorashada madaxtinimada Puntland ee lafilayo inay qabsoonto bilowga bisha 1aad ee sanadka foodda nagu soo haya (2019).
Guud ahaan sagaalka gobol waxaa ka socota soo xulista xildhibaanada cusub ee barlamaanka, waxaana jira musharixiin dhalinyaro u badan oo u hardamaya sidii ay ugu soo bixi lahaayeen kuraasta beeshooda maadama Puntland laysku doorto weli hanaanka qabaliga ah.
Odayaasha dhaqanka iyo cuqaasha beelaha degan Puntland ayaa soo xulaya musharixiinta ugu habboon ama kuwa buuxiya danaha gaarka ah ee ay odayaashu leeyihiin oo ay ku lifaaqan tahay rabitaanka musharixiinta oo ku naban odayaasha si ay ugu soo xulaan xubno taageersan, waxaana intaasi kadib loo gudbiyaa isinka guud ee beesha oo qof ka soo saari doona.
Soo gudbinta beesha kadib waxaa xildhibaanka cusub loo gudbin doonaa gudiga xallinta khilaafaadka oo uu madaxweynuhu magacaabi doono, kuwaasi oo soo kala saari doona xubnaha isku beesha ah ee halka kursi ku loolamaya iyo kuwa kale ee aan buuxin shuruudaha xildhibaanimada.
Gudigaan oo qudhiisa marka lamagacaabayo muran badan ka dhasho maadaama musharixiintu ay mararka qaar danohooda ka dhex waayaan ayaa waxaa horyaal caqabado badan oo u baahan inuu xal ka gaaro si loo helo kuraasta barlamaanka oo dhammaystiran.
Musharixiinta ayaa dadka ugu jira ololaha doorashada ku khasba inay ku dirqiyaan odayaasha dhaqanka iyo isimada inay la saftaan isla markaana ay soo xulaan xildhibaan ama xubin taabacsan musharaxaasi iyagoo adeegsanaya xeelad qabiil iyo mid dhaqaale.
Musharixiinta ka soo jeeda hal beel haseyeeshee wata saxiixyada kala duwan ee ku andacoonaya in mid walba uu yahay xildhibaanka saxda ah iyo kuwa ka soo jeeda beelaah kuraas wadaaga ah ee meertada isku maandhaafa ayaa gudigaan looga fadhiyaa sidii ay u kala saari laahaayeen ayaa kamid ah caqabadaha wajaha gudigaasi.
Ugu dambayn gudiga ayaa soo saari doona 66 xildhibaan oo noqon doona barlamaanka cusub ee Puntland shanta sano ee soo socota, waxaana ay dooran doonaan gudoomiye iyo labadiisa ku-xigeen iyagoona ugu dambayn soo dooran doona madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa.
LA SOCO XALQADA 2AAD
Waxaas ilmaha yar ee reer PUNTLAND waa ogyahay ee ma war baa weyday.